Inona ny VSCO: fantaro daholo ny momba an'ity rindranasa ity sy ny tambajotra sosialy | Famoronana an-tserasera
Raha mpaka sary sy miaraka amin'ny tambajotra sosialy ianao, dia azo atao tokoa ny mahafantatra ny atao hoe VSCO. Saingy, raha tsy toa izany ary hitanao io fampiharana fanovana sary sy horonan-tsary io dia tokony ho fantatrao fa io dia iray amin'ireo lamaody ankehitriny. Raha ny marina dia misy aza ny fiarahamonina mamorona mitovy amin'ny Instagram.
fa, Inona marina ny VSCO? Manolotra ve izany? Raha te hahafantatra bebe kokoa momba an'ity fitaovana ity ianao dia aza atsahatra ny famakiana ity torolalana kely nomaninay ity mba hampahafantarina anao ny zava-drehetra.
1.1 Ahoana ny fampidinana ny fampiharana amin'ny findainao
2 Ahoana ny fiasan'ny VSCO
2.1 Sivana VSCO
2.2 Fitaovana fampiharana
3 Ny revolisiona ho an'ny vehivavy: ny zazavavy VSCO
VSCO no anaran'ny fampiharana sary sy horonan-tsary, fa tena zava-dehibe sy lehibe tokoa, ka afaka namorona tambajotra sosialy iray manontolo, mitovy amin'ny Instagram, izay ny sary no zava-dehibe. Fa tsy ny olon-kafa fotsiny, fa sary matihanina sy sanganasa be pitsiny no resahina.
Ireo mpamorona an'ity rindranasa ity dia ny Visual Supply Company, za-draharaha amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpaka sary matihanina. Tena namorona preset ho an'ny Lightroom na Aperture, fantatry ny manam-pahaizana momba ny sary.
Misaotra azy ireo fa ny VSCO dia ankehitriny, fa koa amin'ny fampiasana nomen'ny mpampiasa azy, izay nanova azy ho tambajotra sosialy misy sary avo lenta matihanina sy fomba manokana hampisehoana ny asa (fa tsy dia be loatra mitady ilay "mora" mora).
VSCO dia misy amin'ny Android sy iOS izao.
Ahoana ny fampidinana ny fampiharana amin'ny findainao
Na manana finday Android na iOS ianao (na takelaka), dia tsotra be ny misintona ilay rindranasa.
Amin'ny tranga Android, VSCO dia misy ao amin'ny Google Play, ka raha ampidirinao izany ary apetrakao ao amin'ny motera fikarohana dia hiseho eo amin'ireo valiny voalohany izy io.
Aorian'izay dia mila omena fotsiny ianao hametrahana azy ary miandry minitra vitsy mandra-pahatonga azy ho mavitrika amin'ny findainao hanomboka hampiasa azy.
Toy ny mora ihany amin'ny iOS, hatramin'ny nandehanana tany amin'ny AppStore, ny fametrahana ny anaran'ny fampiharana ao anaty motera fikarohana ary ny fipihana ilay iray hametraka azy dia mihoatra ny ampy.
Amin'ireo tranga roa ireo dia mila mamorona kaonty ianao hampiasana azy. Ho an'ity dia angatahina aminao ny mailaka hanohizana amin'ny dingana manaraka, izay hiditra ny teny miafinao. Io dia ahafahanao mifandray amin'ny tambajotra sosialy, toa ny Twitter.
Farany, mila manamarina ilay boaty fotsiny ianao amin'izay manaiky ny fepetra fampiasana ary tsindrio raha hamorona kaonty.
Manomboka amin'io fotoana io dia afaka maka ny sarinao manokana ianao ao amin'ilay fampiharana, nefa manafatra ireo sary efa nalaininao tamin'ny telefaona ihany koa.
Ahoana ny fiasan'ny VSCO
Raha vantany vao misintona ny fampiharana amin'ny findainao ianao dia hahita a tena intuitive sy mora takarina interface. Hanana ny fakantsarinao manokana ianao amin'ny fampiharana iray ihany, na dia tsy manome kalitao tsara aza izy io, fa tsara ho an'ny fakana sary. Anisan'ireo asany, manana ny fifantohana mandeha ho azy ianao, ny fitifirana haingana ary ny fifantohana amin'ny tanana. Ity farany no tena ankafizin'ireo izay mampiasa ilay application.
Na izany aza, ny toerana misongadina indrindra dia, tsy isalasalana, ao amin'ireo sivana sy fitaovana atolotra anao. Miresaka azy ireo lalindalina kokoa isika.
Ny fampiharana VSCO dia manana sivana isan-karazany. Samy misy maimaimpoana sy karama, izay azo vidiana amin'ny fampiharana iray ihany. Ary ny tsara indrindra, ny tsirairay amin'izy ireo dia samy manana ny safidiny manokana, izay ahafahanao manamboatra sy mampiasa azy ireo amin'ny fomba samihafa. Ohatra, azonao atao ny manova ny saturation, hue, mifanohitra, mifantoka, mizana ...
Anisan'ireo fitaovana izay azonao atao amin'ny fampiharana, misy ny sasany tena miavaka. Ilay voalohany dia azo antoka GRID. Safidy arakaraka izay ahafahanao mampakatra ireo sary alainao ao amin'ny "tranomboky sary". Ny tanjona dia ny hizaran'ireo mpampiasa ny sary nalainy sy ny fanitsiana azy ireo hamoronana fanangonana ary avy eo hamorona tantara. Mazava ho azy, toerana "manokana" izy io, izay hahitanao ny sarinao ary hampifanarahina amin'ireo fitaovana rehetra anaovanao ny kaontinao.
Amin'ny alalany no azonao atao zarao amin'ny tambajotra sosialy na amin'ny fampiharana ny sary. Raha ny marina dia mahazatra ny mahita referansa VSCO ao amin'ny Instagram.
Fitaovana iray hafa ananany ny tambajotra sosialy. Ary, amin'ny alàlan'ny fizarana "Discover", azonao atao ny mizaha ireo sarin'ireo matihanina hafa ary manaraka ny mpampiasa na gaga amin'ireo mombamomba ny vondrom-piarahamonina navoaka.
Raha raisina an-tsaina fa iray amin'ireo fampiharana ankafizin'ny tanora indrindra izy androany, satria misy fitaovana hanovana sary miaraka amin'ny sivana isan-karazany sy manokana, ary tambajotra sosialy, tsy mahagaga raha mihamaro ny olona maheno momba azy .
Ny revolisiona ho an'ny vehivavy: ny zazavavy VSCO
Zazavavy VSCO na zazavavy VSCO. Izany no fahafantarana ny zazavavy kely izay ao amin'ny tambajotra sosialy an'ny fampiharana. Ary, na dia betsaka aza ny kaontin'ny lehilahy, dia tsy maintsy ekena fa vehivavy no lehibe indrindra.
Ny maha-tovovavy VSCO dia samy manana ny heviny. Ary izy ireo dia miavaka amin'ny vehivavy matetika manao akanjo mitovitovy, ary manana kolontsaina mitovy amin'izy ireo. Amin'izany fomba izany, ny fisehoana, ny bika, ary na ny fomba fihetsika aza, dia mahatonga azy ireo ho raisina ho isan'ity vondrona ity.
Misy koa antsipiriany sasany izay "manome" azy ireo ho zazavavy VSCO, toy ny mitondra Hydro Flask na cantine mitovy amin'izany miaraka amina stiker Redbubble; mandehana miaraka amin'ny scrunchy eo amin'ny tanana, toy ny fehin-tànana; T-shirt voatoto na be loatra. Izy ireo koa dia afaka manao rojo akorandriaka sy kitapo kitapo Fjällräven.
Na izany aza, ireo zavatra rehetra notanisainay ireo ireo dia nanjary nahafeno fepetra ho an'ity vondrona ity: fotsy, manankarena ary mahia. Ary ny kitapom-batsy na ny cantine dia tsy zavatra mora vidy, afaka mahatratra 100 euro mahery izy ireo. Ho fanampin'izay, sokajiana ho "posh" izy ireo, satria marika izay rehetra ananany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » Inona ny VSCO